I-Semalt: I-Extractor Data Data - I-Best and Reliable Tool
Kuyaziwa kakhulu ngezinto ezincedo kunye nokukwazi ukwenza imisebenzi emininzi ngexesha. Le software ikuvumela ukuba uhlambe umxholo kwi-Aliexpress. com, i-Boohoo. com, Amazon, kunye ne-eBay. Ungalondoloza iifayile kwiDropbox kunye neGoogle Drive, okanye uyikhuphe ngqo ngqo kwi diski yakho.
U-Mozenda usebenza njani?
UMozenda wenza imisebenzi yakhe ngokwemodeli elandelayo:
1 - intertops red no deposit. Ichonga idatha kwiindawo ezininzi. Okokuqala, iMozenda ibonisa iipatheni zedatha.
2. Kwinqanaba elilandelayo, lidibanisa iifasethi.
3. Okwesithathu, ukulayishwa kweMozenda kubangele iinkonzo ezimbini zokugcina ifu: iDropbox kunye ne-AWS.
I-Mozenda Web Console kunye noMyili we-Agent
1. I-Mozenda Web Console - Lolu hlelo lokusebenza lwewebhu lusivumela ukuba sisebenzise ama-agent ethu (iiprojekthi zeprape). Singajonga kwaye siququzelele iziphumo kwaye sithumele idatha ekhishwe kwi-CSV ne-JSON.
2. Ummeli we-Agent - Yisicelo seWindows esisetyenziselwa ukwakha iiprojekthi ezininzi zokukhutshwa kwedatha ngexesha elinye.
Iinkalo ezininzi ezahlukileyo zeMozenda:
1. Isoftware nganye:
UMoenda uyaziwa ngokubanzi ngomsebenzisi walo. Akusiyo kuphela i-extractor yewebhu kodwa kwaye i-crawler; le software isebenzisa i-bots ehlukeneyo ukukhawulela amaphepha akho ewebhu. Iyakwazi ukukhipha idatha kwiiwebhsayithi ezivinjelweyo, kwaye kufuneka uqonde i-URL ukuze ikhutshwe kwangoko. Ngaphezulu, inikeza ugaxekile ukukhusela kunye nokulungisa zonke iimpazamo ezincinci kumxholo wakho.
2. Efanelekileyo kumashishini amancinci:
Njengokuqala, akunakwenzeka ukuba utyalomali kumaxabiso angamaxabiso e-data scrapers okanye kwi-crawlers yewebhu. Nangona kunjalo, iMozenda yi software ekhululekile eyenza imisebenzi enzima kakhulu. Ihlalutya amaxwebhu ewebhu, iqokelela ulwazi malunga nabakhuphiswano, imimiselo yamuva, iimarike ezikhulayo, kwaye iziphumo zakho zifunyenwe kwimibandela yemizuzu. I-Mozenda ilungele ama-freelancers kunye namashishini amancinci kwaye akufuneki ukuba ube neenkcukacha zokubhala okanye iinkqubo.
3. Songa yonke iwebsite:
Ukuba ukhangele ukukrazula yonke i-website, iMozenda yinto efanelekileyo kuwe. Abaphandi bafuna ukufumana ulwazi kwiimagazini kunye ne-e-books ukuqhuba iimvavanyo zabo. Esi sixhobo sinceda ukuqokelela idatha enokubaluleka kunye nenani ngendlela engcono, kwaye iinkampani zinokusebenzisa iMozenda ukuzisa nokuthengisa iimveliso ezahlukileyo.
4. Ulungele ukuqaphela ngolwazi:
Ukuba uqalise umqondiso okanye ufuna ukukhuthaza iimveliso zakho kunye neenkonzo kwi-intanethi, kufuneka usebenzise iMozenda. Ngale inkonzo yokucoca idatha , unokuqokelela idatha ngokulula, uqhube uninzi lwezilingo kwaye ujonge umgangatho wamaxwebhu akho. Kwakhona, esi sixhobo sinceda ukuvelisa iikhokelo kunye nokukhuthaza i-brand yakho kumajelo asekuhlaleni ngokufanelekileyo nangempumelelo. Ngamafutshane, unokwandisa ishishini lakho usebenzisa le software kwaye unokujolisa kubathengi abanakho kwihlabathi lonke.